I-Bluedome Suite by Otium Villas & Suite - I-Airbnb
I-Bluedome Suite by Otium Villas & Suite
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguOtium Villas & Suites
UOtium Villas & Suites yi-Superhost
Le yindlu yomqolomba esandul 'ukulungiswa eyaqala ngeminyaka yoo-1890. Ebekwe kwenye yezona ndawo zidumileyo e-Oia "Monastiraki" ecaleni kwe-St Spyridon Bluedomes edumileyo.
Iye yalungiswa yaza yalungiswa yaza yalungiswa yaza yahonjiswa kumqolomba wesintu ngoxa yayisenza izinto zokwakha zale mihla. Eli gumbi lilungele abantu abathandanayo neentsapho. 'Iindawo zayo ezimbalwa eziyilwe zikhuthaza ukuphumla nokuba tofotofo kwabahambi bale mihla.
Igumbi lokulala eliphambili elinendawo yokuhlambela engasemva komqolomba elinxibelelene negumbi lokuhlala elivulekileyo elinendawo yokuhlala, ikhitshi negumbi lokuhlambela lesibini elipheleleyo elijongene neveranda nebhafu enamanzi ashushu eyakhiwe ngendlela ekhethekileyo.
Isidlo sakusasa esinganyanzelekanga siyafumaneka ngaphandle kokubhataliswa.
Le ndlu isembindini weOia; ikude neevenkile, iivenkile zokutyela, iikhefi, ii-delicatessens, ezinye iindawo ezidumileyo, iibhasi neeteksi.
Umbuki zindwendwe ngu- Otium Villas & Suites
Iinkonzo zethu ze-concierge ziyilelwe ukubonelela iindwendwe zethu kwinqanaba elikhethiweyo loncedo kwaye zilungiselelwe iimfuno zabo kunye neemfuno zabo. Ukusuka kwindawo ezibekelwe indawo yokutyela zomzuzu wokugqibela kunye neendlela zokuhamba ezicetywayo ukuya kwiihambo ezinqabileyo kunye nokunye okuninzi. Iindwendwe zethu zinokuthembela kuthi ukuba zizalisekise iiholide zazo zamaphupha.
Iinkonzo zethu ze-concierge ziyilelwe ukubonelela iindwendwe zethu kwinqanaba elikhethiweyo loncedo kwaye zilungiselelwe iimfuno zabo kunye neemfuno zabo. Ukusuka kwindawo ezibekel…
Inombolo yomthetho: 1167Κ91001250101
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oía